Xildhibaan Dowladda Soomaaliya ugu Digay in Midowga Afrika kala hadasho kiiska Badda ee Kenya – Kalfadhi
September 9, 2019 September 9, 2019 Hassan Istiila
Guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Cali Jowhar ayaa ka digay in midowga Afrika ay soo dhex galaan dacwadda Badda ee ka dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya .
“Kiiska Badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu marayaa maxkamada caalamiga ah ee ICJ dibna looma soo celin doono” ayuu kalfadhi ku yiri Xildhibaan Cali Jowhar.
Xildhibaanka ayaa uga digay madaxda dowladda in ay maqlaan baaqyada ka imaanaya Midowga Afrika ee ku saabsan kiiska Badda Soomaaliya ee muranka galisay Kenya.
“Madaxda sare ee dowladda waa in aysan ku kalsoonanin wax ka sokeeya Maxkamada ICJ.”
Xildhibaan Cali Jowhar ayaa sheegay in ay muuqato ifafaalo muujinaysa in Kenya looga adkaaday dacwada Maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, waxa uuna sheegay in Kenya ay wado qorshe kale oo ay ku doonayso in kiiska lagu xaliyo qaab hoose oo wada hadal .
Mar uu soo hadal qaaday mudadada 2 bil ee dib loo dhigay dhageysiga dacwada waxa uu ku sheegay in aysan waxba ka badali karin in Soomaaliya ay hesho waxa ay xaqa u leedahay.
Xildhibaan Cali Jowhar ayaa sheegay in Kenya ay dagaal dhinacyo badan ku soo qaaday Soomaaliya, sida xayiraado, cagajuglayn joogta ah iyo dhibaataynta hantida iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkeeda.